बीमा समितिका अध्यक्ष भन्छन्– कोरोना संक्रमित देखेर भागेका होइनौं | Nepal Dabali
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार ११:४९ LeaveaComment on बीमा समितिका अध्यक्ष भन्छन्– कोरोना संक्रमित देखेर भागेका होइनौं
२४ जेठ, काठमाडौं । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछि हट्ने सरकारी रोग बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिमा पनि सरेको छ । वैशाख ७ मा कोरोना बीमा भनेर ल्याएको नयाँ कार्यक्रम बिहीबार एकाएक बन्द भयो । शुक्रबार फेरि वीमा कार्यक्रम खुल्ला गरियो ।
वीमा गर्नेहरुको तीव्र आकर्षण हुँदाहुँदै बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा पोलिसी नै बन्द गर्न समितिलाई दबाव दिए । बीमा समितिले पनि तत्कालै कोरोना बीमा पोलिसी बन्द भएको घोषणा गर्यो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत १५ गते बजेट भाषणमा नै भनेको अर्थात राज्यको प्राथमिकतामा परेको कोरोना वीमा कार्यक्रम एक्कासी बन्द भएपछि सबैको चासो हुने नै भयो । तथापि बजेट कार्यान्वयनमा नै ठाडो चुनौती दिएर बन्द भएको कोरोना बीमा कार्यक्रम शुक्रबार पुनः सुचारु भएको छ ।
कोरोना पोजिटिभ आए एक लाख रुपैयाँसम्मको जोखिम बहन गर्ने यो कार्यक्रम बन्द हुनुको प्रमुख कारण थियो, संक्रमितको संख्या धेरै हुनु । तर, कोरोना बीमा बन्द हुनुको अर्को कारण पनि चर्चामा आएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति पाएका बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको खासै राम्रो सम्बन्ध छैन ।
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार ११:४७ Nepal Dabali